South Asia and Beyond: डा केसीको अनशन केका लागि? माथेमा प्रतिवेदन किन लागू हुनुपर्छ? सेतोपाटीका लागि मेरो अन्तर्वार्ता
डा केसीको अनशन केका लागि? माथेमा प्रतिवेदन किन लागू हुनुपर्छ? सेतोपाटीका लागि मेरो अन्तर्वार्ता
खूला अर्थतन्त्रका नाममा हामीकहाँ जे हुँदैछ, त्यो उदार अर्थतन्त्र हैन, लुटतन्त्र हो । उदार अर्थतन्त्रमै पनि त्यसको सहज व्यवस्थापनका लागि राज्यले निष्पक्ष रेफ्रीको भुमिका निभाउनैपर्छ । नेपालमा पनि राज्यले त्यही भुमिका निभाओस् र सीमित भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरुको हितका लागि तमाम नेपालीको स्वास्थ्यलाई जोखिममा नपारियोस् भन्ने माथेमा प्रतिवेदनको आशय हो ।
Posted by Jiwan Kshetry at 5:34 PM